Maarso | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Maarso, 2012
Al Shabaab oo wadada u gashay ciidamo Itoobiyaan ah, gaari laga gubay iyo askar laga dillay
Maarso 31, 2012
Ciidamadda Xarakada Al Shabaab ee Gobolka Galgaduud ayaa waxay gelinkii dambe ee maanta ay wadada u galleen gawaari ay la-socdeen Ciidamadda Milatariga ee Dowladda Itoobiya.
Gawaari ay wateen Ciidamadda Milatariga ee Dowladda Itoobiya oo ka yimid dhinaca Magaaladda Ceel Buur, kuna sii jeeday Magaaladda Dhuusa Mareeb, ayaa waxaa wadada loogu gallay inta u dhaxeysa Deegaanada Ceel La-helay iyo Warmooley ee Gobolka Galgaduud.
Kahor inta aysan dhex marin wax dagaalo ah ayaa waxaa la-sheegay in miinada nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fog fog laga haggo, lala helay gaari Uraalaha ah oo ay wateen Ciidamadda Dowladda Itoobiya.
Qaraxa ayaa wuxuu qabsaday gaarigaasi oo uu soo gaaray burbur, iyadoo ay ku dhinteen ku dhaawacmeyn qaar ka tirsan Ciidamadda Itoobiya oo gaarigaasi saarnaa, isla-markaana waxaa qaraxa xiggay dagaalo labada dhinc dhex maray.
Muddo kooban kadib ayay dib u gurteen Ciidamaddii Shabaab ee wadada u gallay gawaaridii ay wateen Ciidamadda Milatariga ee Dowladda Itoobiya, iyadoo dhinaca Al Shabaab iyana la-sheegay in uu khasaaro jiro, balse waxaa adag in faah faahin sax ah laga hello.
Ciidamadda Itoobiya oo gurmad dalbaday ayaa waxay gurmad uga yimaadeen dhinaca Magaaladda Ceel Buur, waxaana loo-baahday gaari nooca wiishka loo-yaqaano in lagu soo jiido gaarigii Uraalaha ahaa ee ay wax-yeelada u geysteen Xoogaga Shabaab.
Gaarigaasi ayaa waxaa laga soo doonay Magaaladda Dhuusa Mareeb ee Xaruunta Gobolka Galgaduud, laakiin gaarigaasi oo ay iska lee-yihiin rag ganacsato ah ayaa waxay ka war helleen in lagu soo wajahan yahay, waxayna kala carareyn Magaaladda Dhuusa Mareeb, iyagoona doonaayay inay geeyaan Deegaanada Ximin iyo Xeeb.
Hase ahaatee waxaa lagu qabtay Deegaanka Ontaraale oo qiyaastii 5km u jira Deegaanka Godinlabe, iyadoo Deegaanka Godinlabe iyo Magaaladda Dhuusa Mareeb-na ay qiyaastii isu jiraan 40km.
Ugu dambeen gaarigaasi ayaa waxaa lagu wareejiyay Ciidamadda Milatariga ee Dowladda Itoobiya, si’ay ugu soo jiitaan gaarigii Uraalka ee looga gubay inta u dhaxeysa Deegaanada Ceel La-helay iyo Warmooley ee Gobolka Galgaduud.
XUSUUS: HEESTII CASANOVA IYO XEEBTII JAZIIRA
Wasiirka Wasaaradda Beeraha, Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ee Xukuumadda Kmg ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim, ayaa wuxuu si weyn uu uga horyimid xil ka qaadistii lagu sameeyay.
Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xilkii looga qaaday Wasiirkii Wasaaradda Beeraha, Xanaanada Xoolaha,Dhirta iyo Daaqa.
War deg deg ah Xildhibaano Digil iyo Mirifle oo eedeeyay xil ka qaadis uu sameeyay Madaxweyne Sheekh Shariif
Muqdisho: (WAAJIDPRESS): Xildhibaano ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya ee maanta kulanka ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si kulul u camabaareeyeen xil ka qaadistii Madaxeyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku sameeyay Wasiirkii Beeraha ee Xukuumadda KMG Soomaaliya.
Xildhibaan Sheekh C/qaalikh Sheekh C/laahi Xamsa oo ka soo jeeda DIGIL Iyo MIRIFLE oo markii uu gaba gaboobay kullankaasi la hadlay Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in qaabka uu u maray Madaxweynaha xilka qaadistaasi ay tahay mid sharci darro ah, isagoo tilmaamay in Wasiirka Beeraha uu matalo Beelaha Digil iyo Mirifle, maadaama sida uu hadalka u dhigay DKMG ay ku dhisan tahay Nidaamka 4.5.
Sidoo kale Xildhibaan Sheekh Cabdi Axmd Burrile oo ka soo jeeda JIROON- DIGIL Iyo MIRIFLE oo isna Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu xaq u laheyn in xil ka qaadis uu ku sameeyo Wasiir ka tirsan Xukuumadda KMG ah, isagoo soo bandhigay qodobo ka horimaanaya arrintaasi oo ku qoran Axdiga KMG Soomaaliya.
Xidlhibaan C/laahi Cabdi Garuun oo ka soo jeeda GEELDLE – DIGIL Iyo MIRIFLE ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya looga baahan yahay in uu dib kaga laabto go’aankii uu xilka kaga qaaday Wasiirkii beeraha ee Xukuumadda KMG Soomaaliya.
Dhawaan ayay ahedy markii Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha DKMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilka looga qaaday Wasiirkii Beeraha, ahaana Ra’iisul wasaare ku xigeen kaddib markii lagu eedeeyay wax qabad la’aan.
Ciidamo xoogan oo Itoobiyaan ah oo galabta isugu soo baxay Magaaladda Baydhabo ?
Ciidamo xoogan oo Itoobiyaan ah ayaa waxay galabta isugu soo baxeyn Magaaladda Bayudhabo ee Gobolka Baay, iyadoo ay noqoneyso markii ugu horeysay oo ay sidaanoo kale isugu soo baxaan Magaaladda Baydhabo, xilli ay galab tahay.
Ka soo horjeedka Xaruunta Dahab Shiil ee Magaaladda Baydhabo, ayaa waxaa la-soo dhigay miino nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fog fog laga haggo, taasoo lagu qariyay geed ku yaalla ka soo horjeedka Xaruunta Dahab Shiil ee Magaaladda Baydhabo.
Miinadaan ayaa waxaa la-sheegay inay arkeyn hablo ka mid ah hablaha reer Baydhabo, waxayna ku soo war-gelliyeen Ciidamadda Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya ee joogga Magaaladda Baydhabo, waxayna xaqiiqsadeen in halkaasi la-soo dhigay miino, taasoo keentay inay ku war-galliyaan Ciidamadd Dowladda Itoobiya ee joogga Magaaladda Baydhabo.
Ciidamadda Milatariga ee Dowladda Itoobiya ayaa waxay xireyn agagaraha Xaruunta Dahab Shiil ee Magaaladda Baydhabo, waxayna dadka iyo gawaarida ay u diideen inay goobtaasi isugu kala gooshaan, inta ay soconeyso miino soo saarida.
Waxaa weli xiran goobta ay xireyn Ciidamadda Dowladda Itoobiya iyo kuwa Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya, waxayna weli Ciidamadda Itoobiya ay ku mashquulsan yihiin sidii ay miinadaasi uga soo saari lahaayeen halkaasi.
Ciidamadda Itoobiya marka ay miino baarista ka sameynayaan Magaaladda Babdhabo, ayaa waxay xiraan dhamaan wadooyinka soo galla, kana baxa goobaha ay miino soo saarida ay ka sameynayaan, iyadoo ay xusid mudan tahay in miinooyinka noocaanoo kala ah laga qarxin karaayo masaafo dhan 100 tallaabo.
Shalay iyo maanta ayaa waxaa Magaaladda Baydhabo lagu arkaayay Ciidamadd Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya oo qura oo ammaanka suggaaya, halka kuwa Itoobiya ay ku xareysnaayeen xaruumaha ay ka deggan yihiin Magaaladda Baydhabo.
Xildhibaanada Uu Hogaamiyo Madoobe Nuunow Maxamed Oo Maanta Doortay Gudiga Doorashada Madaxtinimada Soomaaliya
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Mudanayaasha baarlamaanka KMG Soomaaliya Garabka uu hogaamiyo Xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed ee ka soo horjeeda Shariif Xasan Sheekh Adan ayaa maanta doortay gudiga Doorashada ee madaxtinimada wadanka Soomaaliya.
Xildhibaan C/fitaax Ibraahim Rashiid oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in gudigaan maanta la doortay ay diyaarinayaan doorashada madaxtinimada wadanka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay mudanahaan ka tirsan baarlamaanka KMG Soomaaliya in dhowaan gudigaan uu soo bandhigi doonoqaabka ay doorashadaasi u dhacayso.
C/fitaax Ibraahim Rashiid ayaa wuxuu intaasi ku sii daray warkiisa in ay haatan jiraan masuuliyiin badan oo isku soo sharaxay xilka madaxtinimada wadanka Soomaaliya.
Xildhibaanadaan aya hoeray waxay xilkii kaga qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka KMg Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Adan iyo waliba ku xigeenkiisa.
Sidoo kale dhowaan ayaa waxay sheegeen in doorashada ay qaban doonaan daba yaaqada bisha April isla markaana ay dooran doonaan madaxweyne sharci ah waa sida ay hadalka u dhigeene.
Xildhibaanadaan ayaa waxay ku doodayaan in ay madaxda dowlada KMG Soomaaliya ay ka talaabsadeen sharcigii taasina ay keentay in baarlamaanka KMG Soomaaliya uu si gaar ah u tashado.
CAASIMADA 2AAD OO BAYDHABO AH MAXAA SHIRKA LOO GEYN WAAYEY OO GAALKACYO LAGALA DOONEY
Eng Saalax Sh. Cismaan oo ah Madaxa Hay’adda Peace & Development Research “PDR” ayaa sheegay in Shacabka ku dhaqan Shalembood ee gobolka Shabeelaha Hoose ay ka badan yihiin shacabka hoos yimaada maamulka GalMudug xilli uu ka qeyb qaadanayey dooda Falanqeynta Jimcaha ee Idaacada BBC-da laanteeda Af Soomaaliga.
Dooda shalay oo ku saabsaneed qorshaha tubta nabadda “RoadMap” ayuu Eng Saalax ku tilmaamay in qorshahaas uu yahay eber, sheyga hadduu eber yahayna inuusan laheen wax kasoo qaad.
Eng Saalax ayaa farta ku fiiqay sababta shirka loo geyn waayey magaalada Baydhabo maadaama laga xoreeyey Al Shabaab isla markaana ay tahay caasimada labaad dalka sida ku qoran Charter-ka Dowladda KMG ah, isagoo warkiisa kusoo koobtay xikmada oraneysa “Timirba laf ayaa ku jirta” taas oo uu ula jeeday qorshaha RoadMap-ka waxbaa ku qarsoon.
Mar wax laga weydiyey Eng Saalax waxyaabaha uu ku diidan yahay qorshaha RoadMap-ka ayuu carabaabay in koox yar oo aysan jirin cid ay matalaan ay wataan qorshahaas, iyadoo buu yiri aan laga qeyb galin dadka u dhashay gobollada Koonfureed ee Soomaaliya sida Digil iyo Mirifle, Jareer Weyne iyo Biya maal.
Dooda oo aad xasaasi u aheed ayaa ka qeybgalayaasha waxay isku raaceen xikmadii aheed “Hal Booli ah nirig xalaal ma dhahso” marka laga reebo Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle oo aan awood ku laheen hehsiiska RoadMap-ka.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ay ka muuqatay difaaca shakhsi gaar ah ayaa isku dayey inuu difaaco qorshaha Road Map-ka, iyadoo weriyihii daadihinayey dooda uu weydiyey halka loo badan yahay inuu arkayo iyo in kale balse Xildhibaan Ibraahim uma muuqan danta ummada Soomaaliyeed iyo tan beesha uu kasoo jeedo, wuxuuna ku adkeystay inuu difaaco dano shakhsi oo aan la ogeyn inta ay wada socon doonaan.
Barakac baahsan oo ka socda Ceelasha Biyaha iyo gawaarida lagu qaxayo oo lagu kireenayo 160$
31.March.2012;- Wararka ka imaanaya deegaanada loo barakacay ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayan in barakac aad u baahsan uu waqtigaan ka socdo wadada xariirisa inta u dhaxeeysa degmada Afgooye iyo Muqdisho.
Sida wararka aynu ku heleeyno deegaanka Ceelasha Biyaha inta deegaanada ku hareereysan ayaa waxa ay warinayaan in boqolaal qoys oo dagan duleedka ay u soo hayaamayaan magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Deegaanka Taree Disho[Kilo Mitir Saddex Iyo Toban], Siinka Dheer, Ceelasha Biyaha, Lafoole ayaa la sheegayaa in qoysas aad u tiro badan ay iminka u kicitimeen dhanka magalada Muqdisho.
Barakacan ka socda ayaa waxaa ka dambeeyay dagaal shalay si weyn u gilgilay duleedka magaalada Muqdisho iyo madaafiic sida la sheegay ku dhacday guryo ku yaal deegaanka Ceelasha Biyaha oo sababtay qasaarooyin kala duwan.
Inta u dhaxeeysa wadada dheer ee xiriirisa Afgooye oo Ka tirsan Sh/Hoose iyo magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayaa gawaari PL ah iyo kuwa xamuulka qaada oo u raran qoysas badan oo ka guuraya halka loo barakacay.
Qof u sii cararaya Muqdisho ayaa Warqaad.com goordhow oo maanta ah u sheegay in gaariga uu qoyskiisa kula soo cararay loogu kireeyay lacag dhan 160$, halka kuwa qaarna lagu kireenayo 190$.
” waa ku qasban tahay in 160$ aad siiso gaariga aad ku qaxeeyso waayo waala kala ordayaa, qaar ayaaba arkeysaa oo ku leh iyo 90$[190$], marka anagana nafta na heeysa” ayuu yiri ruux magaciisa qariyay.
Dhanka kale waxaa la arkayaa Qoysas danyar ah oo ku qaxaya gaari dameero iyo kuwo la arkayo iyagoo ku lugeenaya cagtooda, waxaana waqti kasta laga baqayaa inla hardamo.
Al Shabaab oo odayaasha ku dhaqan Magaaladda Garbahaarey ugu yeertay inay deg deg ku yimaadaan Buurdhuubo?
Xarakada Al Shabaab oo xilligaan wajaheysa dagaalo baahsan oo dhawr jiho leh, ayaa waxay Odayaasha Golaha Dhaqanka ee Magaaladda Garbahaarey ku dhaqan ugu yeertay inay deg deg ku yimaadaan Deegaanka Buurdhuubo ee Gobolka Gedo.
Xarakada Al Shabaab ayaa waxay Odayaasha Golaha Dhaqanka ee Magaaladda Garbahaarey ay ku wargellisay inay yimaadaan Deegaanka Buurdhuubo, oo qiyaastii 40km u jirta Magaaladda Xaruunta ee Garbahaarey.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in Xarakada Al Shabaab ay taageero dhinaca dhaqaalaha ay ka dooneyso Odayaasha Golaha Dhaqanka, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Magaaladda Garbahaarey oo ay ka arrimiso Dowladda.
Odayaasha Golaha Dhaqanka oo qaarkood la-hadlay Shabakadda Warbaahinta ee Dhacdo.com, iyagoo ka gaabsanaaya magacyadoodu ayaa waxay sheegeen inay taggi doonaan Deegaanka Buurdhuubo, ayna soo ogaan doonaan ujeedada dhabta ah ee loogu yeeray.
Odayaashu ayaa waxay tilmaameyn inay fillayaan in Al Shabaab ay ka dooneyso taageero dhinaca dhaqaalaha ah, balse ay dhabta ogaan doonaan sida ay yiraahdeen marka ay taggaan Deegaanka Buurdhuubo.
Majirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Saraakiisha Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya ee ku sugan Magaaladda Garbaharey, oo ku aadan in Odayaasha Golaha Dhaqanka ee reer Garbahaarey looga yeeray Deegaanka Buurdhuubo, oo ay ka arrimiso Xarakada Al Shabaab.
War deg deg ah: Dagaal Qasaaro xoogan gaystay oo ka dhacay Koofurta Magaalada Gaalkacyo
31.March.2012: Wararka naga soo gaaraya Magaalada Galkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in xalay uu halkaas ka dhacay Dagaal xoogan.
Sida ay sheegayana Wararka dagaalka ayaa udhaxeeyay Ciidamada Maamulka Galmudug State iyo Maleeshiyaad hubaysan.
Waxaa Dagaalkaas uu bilowday kadib markii Ciidamada Galmudug ay gudaha Magaalada ka sameeyeen Howlgal xoogan si ay usoo qabtaan Nin horey dil ugu gaystay Magaalada.
Laakiin Ninkaas ayaa waxaa difaacay Koox Hubaysan, taas oo keentay in dagaal dhacay uu sababo dhimashada Hal Ruux iyo dhaawaca labo kale oo ahaa dhinacyadii dagaalamay.
Ciidamada Amaanka Galmudug ayaa la sheegay in ay sii wadi doonaan Howlgalada noocaan oo kala ah.
Maalin kahor ayay ahayd Markii Gudaha Gaalkacyo lagu toogtay Nin dil horey ugu gaystay Magaalada Gaalkacyo.
Dhanka kale Wasiir kuxigeenk Amniga Galmudu Axmed Maxamuud Baasto ayaa sheegay in la qaaday isbaaro taaalay inta udhaxaysa Deegaanada Galmudug iyo qeybaha kale ee Gobolada Bartamaha.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2012.